Dzidzisai Vana Nzira Yokuwana Nayo Mufaro
Nei Jehovha ari “Mwari anofara”?
TOSE tinoda kufara, handiti?— Asi havasi vanhu vazhinji vari kunyatsofara. Unoziva here kuti nei?— Nokuti havana kudzidza chinokosha kuti munhu afare. Vanofunga kuti kuwana zvinhu zvakawanda ndiyo nzira yokuwana nayo mufaro. Asi pavanowana zvinhu zvacho, mufaro wavo haugari kwenguva refu.
Ichi ndicho chinokosha chacho. Mudzidzisi Mukuru akati: “Pane mufaro mukuru pakupa kupfuura uri pakugamuchira.” (Mabasa 20:35) Saka, nzira yokuwana nayo mufaro ndeipi?— Ndeyokupa vamwe zvinhu kana kuvawo nezvaunovaitira. Waizviziva here izvozvo?—
Ngatimbofungazve pamusoro peizvi. Jesu akati munhu aizogamuchira chipo aisazofara here?— Aiwa, haana kudaro. Unoda kuwana zvipo, handiti?— Munhu wose ndizvo zvaanoda. Tinofara patinogamuchira zvinhu zvakanaka.
Asi Jesu akataura kuti panotova nomufaro wakawanda patinopa. Saka ndiani waungati akapa zvinhu zvakawanda kuvanhu kupfuura vamwe vose?— Chokwadi, ndiJehovha Mwari.
Bhaibheri rinotaura kuti Mwari “anopa vanhu vose upenyu nokufema nezvinhu zvose.” Anotipa mvura kubva kudenga chero nezuva, kuitira kuti zvirimwa zvikure tigova nezvokudya. (Mabasa 14:17; 17:25) Ndicho chikonzero nei Bhaibheri richiti Jehovha ndi“Mwari anofara”! (1 Timoti 1:11) Kupa vamwe ndicho chimwe chezvinhu zvinoita kuti Mwari afare. Uye patinopa, zvinogona kutiita kuti tifarewo.
Chii chingakuita kuti ufare kupfuura kudya makeke ako ose woga?
Zvino chii chatingapa vamwe vanhu? Ungati kudii?— Dzimwe nguva chipo chinoda mari. Kana chiri chipo chaunowana muchitoro, unofanira kuchibhadhara. Naizvozvo kana uchida kupa chipo chakadaro, ungafanira kuchengetedza mari kusvikira wava neyakawanda zvakakwana kuti utenge chipo chacho.
Asi hazvisi zvipo zvose zvinofanira kubva kuzvitoro. Somuenzaniso, musi wakunenge kuchipisa, mvura yokunwa inotonhorera inonyevenutsa kwazvo. Naizvozvo paunopa chipo ichocho kumunhu ane nyota, unogona kuwana mufaro unobva pakupa.
Rimwe zuva zvimwe iwe naamai vako munogona kubheka makeke. Izvozvo zvinganakidza. Asi ungaitei nemamwe emakeke iwayo chingakufadza kupfuura kuadya ose woga?— Unogona kuenda nawo sechipo kune imwe yeshamwari dzako. Ungada kuzodaro pane imwe nguva here?—
Mudzidzisi Mukuru nevaapostora vake vose vaiziva mufaro wokupa. Unoziva kuti chii chavakapa vanhu here?— Chakanga chiri chinhu chakanakisisa munyika! Vaiziva chokwadi pamusoro paMwari, uye nomufaro vakagovana mashoko akanaka aya nevamwe. Vakaita izvi vasingamboiti kuti mumwe munhu avape mari nokuda kwezvavaipa.
Rimwe zuva muapostora Pauro neshamwari yake yakanaka mudzidzi Ruka vakasangana nomumwe mukadzi uyo akanga achida kuwanawo mufaro wokupa. Vakasangana naye zasi pedyo norwizi. Pauro naRuka vakaenda ikoko nokuti vakanga vanzwa kuti yaiva nzvimbo yokunyengeterera. Uye zvechokwadi, pavakasvika, vakawana vamwe vakadzi vachinyengetera.
Pauro akatanga kuudza vakadzi ava nezvaJehovha Mwari noUmambo hwake. Mumwe wavo ainzi Ridhiya, uye akanyatsoteerera. Pashure pacho, Ridhiya aida kuita chimwe chinhu chokuratidza kuti aifarira zvechokwadi mashoko akanaka aakanga anzwa. Saka akakurudzira Pauro naRuka kuti: “Kana imi varume mandirangarira kuva ndakatendeka kuna Jehovha, pindai mumba mangu mugare.” Uye akaita kuti vauye kumba kwake.—Mabasa 16:13-15.
Ridhiya ari kuti chii kuna Pauro naRuka?
Ridhiya akafara kuva nevashumiri vaMwari ava pamba pake. Aivada nokuti vakamubatsira kudzidza nezvaJehovha naJesu uye kuti vanhu vaigona kurarama nokusingaperi sei. Zvakamufadza kukwanisa kupa Pauro naRuka zvokudya uye nzvimbo yokuzororera. Saka kupa kwaRidhiya kwakamufadza nokuti aida kupa zvechokwadi. Ichocho ndechimwe chinhu chatinofanira kuyeuka. Mumwe munhu angatiudza kuti tinofanira kupa chipo. Asi kana tisingadi kuzviita, kupa kwacho hakuzotifadzi.
Nei Ridhiya ari kufara nekugamuchira Pauro naRuka mumba make?
Somuenzaniso, ngatitii une siwiti yauri kuda kudya, ini ndokuudza kuti unofanira kupawo mumwe mwana, waizofara kumupa here?— Asi zvakadini kudai waiva nesiwiti wobva wasangana neshamwari yaunoda zvikuru? Kana wagara uchida kuipawo zvako, izvozvo hazvikufadzi here?—
Dzimwe nguva tinoda munhu zvokuti tinoda kumupa zvose isu tosara tisina. Sezvatinokura murudo rwedu naMwari, iwayo ndiwo manzwire atinofanira kuita neZvake.
Nei mukadzi murombo uyu akafara kupa zvose zvaaiva nazvo?
Mudzidzisi Mukuru aiziva nezvomumwe mukadzi murombo akanzwa nenzira iyoyo. Akamuona patemberi muJerusarema. Aiva nemari duku mbiri bedzi; ndiyo yose yaaiva nayo. Asi akaiisa yose mubhokisi somupiro, kana kuti chipo, chetemberi. Hapana akamumanikidza kupa. Vanhu vazhinji ipapo havana kutomboziva zvaakanga aita. Akazviita nokuti aida kudaro uye nokuti ainyatsoda Jehovha. Zvakamufadza kukwanisa kupa.—Ruka 21:1-4.
Pane nzira dzakawanda dzatinogona kupa nadzo. Ungafunga nezvedzimwe dzacho here?— Kana tikapa nokuti tinonyatsoda, tichafara. Ndicho chikonzero nei Mudzidzisi Mukuru achitiudza kuti: “Garai muchipa.” (Ruka 6:38) Kana tikadaro, tichaita kuti vamwe vanhu vafare. Uye tichafara kupfuura vose!
Ngativerenge zvimwe pamusoro pokuti kupa kunouyisa sei mufaro, pana Mateu 6:1-4; Ruka 14:12-14; na2 VaKorinde 9:7.
Kuva Nerupo Kunoita Kuti Ufare